အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: အကြိမ်(၂၀)မြောက် တိုကျိုမြို့မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲတော် စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ။
အကြိမ်(၂၀)မြောက် တိုကျိုမြို့မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲတော် စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ။
ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း ။ Lian Khan Sum/ Ko Thar Htet(bcjp).
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 11:06 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook